Xubintii Ciyaaraha: Waa mar kale iyo City fkf Wigan iyo xasuustii 2013 (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 30, 2018 2:42 b 0
Waxaa la sameeyay isku aadka wareega shanaad ee FA Cup, waxaana horey loo reebay kooxaha Arsenal iyo Liverpool, waana mar kale iyo Machester City iyo Wigan iyo xasuustii finaalka 2013 oo Wigan miiska ku rogtay City 1-0. Taasna weli maanka City kama marna!
Kooxda Real Madrid ayaa doonaysa in ciyaaryahanka kooxda Paris Saint-Germain (PSG), waa Neymar, ay mushaar ahaan sannadkii siiso lacag dhan 50 million, meesha uu hadda sanadkii PSG ka qaato 30 million. Dagaalka kala reebta waaweynku waa biloow iyo wareeggii 1aad. Ha moogaan oo Daljir iyo Yameni kala soco.